Ohatrinona ny lanjan'ny horonantsary 1m voarakitra ao amin'ny 4K miaraka amin'ny iPhone 6s? | Vaovao IPhone
Ohatrinona ny horonan-tsary iray minitra voarakitra ao amin'ny 4K mandray amin'ny iPhone 6s?
Efa nanamafy ny iray amin'ireo vaovao ratsy indrindra, izay tsy iza fa ny maodely fototra an'ny iPhone 6s mijanona ny 16GB, ary ireo finday avo lenta an'ny paoma manaikitra hanoratra amin'ny kalitaon'ny 4K, iray amin'ireo ahiahy lehibe indrindra ny fahalalana ohatrinona ny horonantsary noraisim-peo amin'io fanapahan-kevitra io. Raha ny lojika dia hanana toerana be dia be izy ireo ary ny 16GB dia tsy hanao zavatra firy raha te-handraikitra ny horonantsarinay amin'ny kalitao avo indrindra izahay.
Ao amin'ny fikirakirana ny iPhone 6s dia hisy safidy hisafidianana ny kalitao tianay handraketina ilay horonantsary (misaotra fa tsy nanantena kely aho). Ao amin'ny fizarana mitovy amin'ireo toe-javatra dia misy lahatsoratra manazava ohatrinona ny lanja iray minitra voarakitra isaky ny fanapahan-kevitra. Manao fikajiana be fanantenana, azontsika atao ny milaza fa tsy ho azo atao ny manatona horonantsary adiny iray.
Araka ny hitanao amin'ny pikantsary teo aloha, izay avy amin'ny horonan-tsary nakarin'i MKBHD, ny lanja / minitra amin'ireo horonantsary voarakitra ao amin'ny iPhone 6s dia toy izao:
60mb amin'ny famahana 720p HD amin'ny 30fps
130mb amin'ny famahana 1080 HD mankany 30fps
200mb amin'ny famahana 1080p HD mankany 60fps
375mb amin'ny famahana 4K
Raha manao kajikajy isika ary manomboka amin'ny fotony fa ny iPhone 16GB dia ho 13GB eo ho eo eo ivelan'ny boaty, azontsika lazaina fa tsy hahatratra ny 35 minitra amin'ny horonantsary voarakitra ao amin'ny famahana ny 4K, ary tsy maintsy esorinay ny toerana izay hipetrahan'ny rindranasa apetrakao.
Ka raha mieritreritra ny hividy iPhone 6GB 16GB ianao dia tsy maintsy zatra amin'ilay hevitra hoe afaka manao horonan-tsary roa ianao ary tsy maintsy hamindra azy ireo amin'ny solosaina vao afaka mamorona horonan-tsary vaovao indray. Na dia azonao atao aza ny mampihena ny kalitao sy ny firaketana amin'ny 1080p HD vahaolana amin'ny 30fps.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 6s » Ohatrinona ny horonan-tsary iray minitra voarakitra ao amin'ny 4K mandray amin'ny iPhone 6s?
Heveriko fa ny fomba tsara indrindra dia ny fandraisam-peo ny horonan-tsarinao, ny fanovana sy ny fanondranana azy ireo, ny famafana azy ireo amin'ny fitaovana ary dia izay, tsy ho sarotra aminao ny manana horonan-tsary marobe ka mety ho hitanao ny fotoana vitsivitsy voalohany aorian'izay dia hadinonao izy ireo ary fahatsiarovana fotsiny no entin'izy ireo (nitranga tamiko matetika izany)
Joham dia hoy izy:
Raha marina ny anao dia manao toy izany koa aho amin'ny horonan-tsary sy sary (mba hahafahan'ny sary an'arivony hameno ny fitaovana), rehefa mandeha ny fotoana dia manadino azy ireo ianao, arahaba.
P, D, manana iPhone 4s 8gb aho (mahafinaritra hehe)
Valiny tamin'i Joham
Mahaliana, tena mahaliana, satria tsy maintsy mividy iPhone7 64GB isika (Amin'ny 32GB an'ny iPhone5 dia tsy omeny ahy mihitsy). Tsy bitrate ambony toy izany, 50mbps amin'ny 4k dia tsara, izy io no bitrate an-tongotra mandeha amin'ny GoPro Hero4. Ny kely hitako dia ny bitrate an'ny 720p30fps sy 1080p30fps, na tsara toy inona aza ny fakan-tsary miaraka amin'ny bitrate ambany noho ny 25mbps, dia toa ratsy be ny horonan-tsary. Amin'ny mihetsika miadana inona ireo bitrates?
Anarana dia hoy izy:
Azonao atao ny misafidy 1080 amin'ny 120 fps na 720 amin'ny 240 fps
Valiny tamin'i Germán
Podad IPad News 2x02: Famakafakana Keynote an'ny Apple